Ciyaartoy lagu baacsadey garoon ka dib gool ay ka dhaliyeen kooxdii ay la ciyaarayeen – SBC
Ciyaartoy lagu baacsadey garoon ka dib gool ay ka dhaliyeen kooxdii ay la ciyaarayeen
Posted by editor on Aktoober 2, 2011 Comments
Qosol & maad huwan waa wareey, iga bixi iyo tanina maxay aheyd ayaa ka dhacay garoon kubada cagta oo ku yaal wadanka Bosnia ka dib markii taageerayaasha kooxdii martida loo ahaa inta garoonkii ku soo daateen ay baacsadeen ciyaartoydii kooxda kale ee martida aheyd.
Kulan ciyaareed ka tirsan Koobka wadanka Bosnia oo ay ku kulmayeen labada kooxeed ee Velez & Zrinjski oo isku magaalo ka dhisan isla markaana aad isku neceb ayaa ku dhamaaday fawdo iyadoo taageerayaasha kooxda Zrinjski ay eryadeen ciyaartoyda kooxda Veles ka dib markii ay gool dhaliyeen ciyaarta oo aheyd mid adag oo waqti lagu darey.
Labada kooxood oo ka wada dhisan magaalada koonfurta Bosnia ku taal ee Mostar ayaa waxaa ka mid ah nacaybka ay isku qabaan iyagoo ay wada degaan laba qawmiyadood oo kala ah Croat-ka & Muslimiinta iyadoo laba kooxood ay kala socdaan labada qaybood ee magaaalda.
Ciyaaryahan Rijad Demic ayaa gool caaqibo leh wuxuu ka dhaliyey kooxda Zrinjski ciyaarta oo aheyd mid aad u adag, balse ciyaartoyda kooxda Velez oo u dabaaldegaya goolkaasi ayey waxay ka warheleen daad dad ah oo garoonka ku soo batoocay, iyadoo dhagaxaan, batariyada tooshashka iyo wax kasta oo gacan qabad ah ay la beegsanaya.
Ciyaartoyda Velez ayaa cagaha wax ka dayey iyagoo naftooda kala baxsadey garoonka waxaana halkaasi ka dhacdey kabaha ha iga goyn iyo waa waareey.
Muuqaalada Tv-yada laga baahiyey ee dhacdadaasi ayaa waxaa ugu qosol badnaa iyadoo ciyaartoyda kooxda Velez orodka ka baxaya la moodo inay ku jiraan ciyaar counter attack uu socdo kuwaasi oo wax kasta oo orod naftooda ay ku badbaadin karaan cagaha ka dayey.
Sidoo kale mid ka mid ah ciyaartoyda kooxda Zrinjski oo ku faraxsanaa sidii loo bursadey ragii ay la ciyaarayeen ayaa mar isku dayey in uu laaco ciyaaryahan baxsanayey hase yeeshee dib ayuu isku qabtey isagoo soo xusuustey xeerarka ciyaarta.
Dhacdooyinka caynkan oo kale ah ayaan ku cusbneyn wadanka Bosnia iyadoo maalinimadii sabtida ciyaar ka mid aheyd horyaalka heerka koowaad ee Bosnia oo u dhaxeysay kooxaha Borac & Zeljeznicar la baajiyey ka dib markii taageeyaasha kooxda Borac ay garoonka ku soo yaaceen, waxaana xiriirka ciyaaraha kubada cagta Bosnia ee magaciisa loo soo gaabiyo (NFSBiH) uu go’aamiyey in sadexda dhibcood ee ciyaartaasi ay qaadato kooxda Zeljeznicar oo iyagu gool dhaliyey intii aanu qalalaasuhu bilaaban.
Sidoo kale kooxda Zeljeznicar ayaa lagu ganaaxay in sadex kulan oo soo socota ay ku ciyaarto taageero la’aan, isla markaana ay bixiso ganaax lacageed oo gaaraya 6500 oo doolar.
Link hoose ka daawo dhacdadan qosolka & yaabka leh ee ciyaartoydu ay firxanayso.HALKAN KA DAAWO